June | 2013 | Wakhet Diary
म्याग्दीको पात्लेखेतमा पहिरोबाट ४५ घर जोखीममा
Posted on June 30, 2013 by Wakhet Diary
बेनी अनलाईन बाट साभार http://benionline.com.np/30100.html
म्याग्दीको पात्लेखेत गाविसको बान्द्रे खल्टीमा गएको पहिरोको कारण ४५ घर जोखीममा परेका छन् । रघुगंगा सामुदायीक बनमा गएको पहिरोको कारण गाविसको वडा नम्वर ४ का ४५ घर जोखीममा परेको स्थानिय सृजनशिल युवा क्लबका सदस्य टेक वहादुर राम्जालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरोले सवै भाग खसाल्न थालेपछी स्थानिय हरि गर्वुजा र थबिलाल गर्वुजाको घर उच्च जोखीममा परेका छन् ।
विगत लामो समयदेखी रघुंगगा नदीको किनारबाट सुरु भएको उक्त पहिरोले गतबर्षदेखी हजारौँ मुरी थान उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन समेत बगाएको स्थानिय कृष्णलाल शर्माले बताए । पहिरो नियन्त्रण गर्नका लागी लगाएको ग्याविन समेत पहिरोले बगाउन थालेपछी स्थानिय चिन्तीत बनेका छन् । बर्षातको समयमा निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछी अहिले स्थानियबासीले जोखीम मोलेर बस्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
गाउँदेखी तल सम्मको खेती योग्य जमिन, जंगल सवै पहिरोले बगाउन थालेपनी जिल्ला विकास समितिबाट पहिरो नियन्त्रणको लागी कुनै सहयोग नभएको स्थानिय दिपक माविका शिक्षक खेमराज सुवेदीले बताए । जमिन भित्र भित्रै बगेर खेतीयोग्य जमिन संगै घरखेत समेत बगाउन थालेपछी अहिले स्थानिय त्रासमा बसेका छन् ।
अहिले जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालय ,गाविस र सामुदायीक बनको १÷१ लाख र वडामा भुसंरक्षणको लागी छुट्टाईएको ६४ हजार रुपैयाँले ५० वटा जालीमा ढुंगा भरेर पहिरो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको सृजनशिल युवा क्लबका अध्यक्ष मुक्ति पाईजाले बताए । उनका अनुसार जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय पोखराले ग्याविन भरेका ८० थान जालीमध्ये १९ वटा पहिरोले बगाईसकेको छ ।
हालै जिल्ला विकास समिति लगायत राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुले उक्त पहिरोको अवलोकन गरेका छन् । पहिरोले बस्ती नै जोखीममा परेकाले जिविस, प्राविधिक कार्यालयसंग सहकार्य गरि लागत स्टेमिट तयार बनाउँदै कार्ययोजना बनाएर विभिन्न निकायको सहकार्यमा पहिरो नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने जिविसका सुचना अधिकृत पदम भण्डारीले बताए ।
उहाँले पहिरोले गाउँनै भेटाउन लागेकाले तत्काल सवै निकायबाट चासोेका साथ बस्ती जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पहिरोले रघुंगा सामुदायीक बनका रुख विरुवा समेत बगाएर लैजान थालेपछी अहिले सयौँ रोपनी जग्गा उजाड बनेको छ भने स्थानियबासीले सम्वन्धीत निकायबाट पहिरो नियन्त्रको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
वाखेत सुधार उन्मुख छ अझै सुधार आवश्यक
Posted on June 28, 2013 by Wakhet Diary
मलाई एउटा साथीले गरेको कुरा सधै याद आउने गर्दछ। ” उमेर र योगदानको हिसावले गाउँको ठुलोबा लाई एउटा समिति को अध्यक्ष बनायौ” समिति को बारे मा २ चार शब्द बोलिदिनुहोस भनेको उहाँले बोल्नलाई उठेर धेरै समाय अनकनाउनु भयो र भन्नु भयो ” म त अध्यक्ष केटा रु बाकी काम तिमीहरुले गर” भनेर बस्नु भयो। यस्ले के देखाउछ भने हामी हरु आफ्नो कुरा राख्नु मै कम्जोर छौ। हामी जति कुरा गर्न चहान्छौ त्यो बोलेर प्रभाव पार्न सकेका छैनौ र थिएनौ। त्यसैले नै समाज मा हामीहरु पछि पर्नु को कारण हो। हाम्रो समाज पनि यस्तै नै थियो। सबैको सामु मा बोल्ने, भाषण गर्ने भन्यो भने बोल्दिन, जान्दिन भन्ने गर्दथे। तर त्यही ब्यक्ती अलि पर-पुगेर अर्को एक जना मात्रै भेट्यो भने यस्तो हुनु पर्ने यस्तो भयो। यो गर्नु पर्ने यस्तो पो गर्यो यति धेरै खण्डन गर्नु सक्छ। कुनै सामाजिक काम गरौ भन्यो भने पनि हालत यस्तै नै थियो। कुनै काम को खण्डन गर्नु छ भने त्यो भेला मा नै गर्नु पर्छ। अनि मात्रै नराम्रो बिचार र काम को ठाउँ मा राम्रो बिचार र काम को जग बस्छ।
अलिकति सुधार आएछ गाउँले माईक्रोफोन मै बोल्न सक्ने भएछन।
गाउँ मा गए पछि मैले ३ वटा सेमिनार (गाउँकै) र ३ वटा आमा समुहको भेला मा भाग लिए। आमा समुहले पनि कार्यक्रम मा सबै मेम्बर ले आएर आफ्नो परिचय दिन शुरु गरेका थिए भने मैले भाग लिएको सेमिनार मा उपस्थित सबैलाई ४-४ मिनेट मा आफ्नो कुरा राख्ने समाय दिईएको थियो। मलाई लागेको थियो ४ मिनेट मा त फलानो सभापति, फलानो पदाधिकारी भनेरै समाय खेर फाल्लान तर म आफै अचम्म भए मेरै आँखाको अगाडी प्रेम बङ बुढाथोकी, खड्क ब. रोका, भिम ब. रोका, भिम ब. पाईजा, भिम ब. राम्जाली, लोक ब. पुन,दलभक्त पाईजा, कृष्ण ब. पाईजा, खेम ब. थापा, मोतिलाल रोका, कमल पुन, याम रोका, जय प्रसाद पुर्जा, दलिमा पुन, सिता राम्जाली, दिलकुमारी राम्जाली, भबिलाल राम्जाली, मनबीर किसान, आदीले ४ मिनेट मै यति धेरै आफुलाई लागेको कुरा यति सजिलै भन्नु भयो कि मौका नभएर रहेछ हाम्रो गाउँलेहरु नबोलेको भन्ने लाग्यो। बोल्ने बाटबरण हुने हो भने सबैको मन मा रचनात्मक कुरा र सकरात्मक कुरा रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो।
बिध्यार्थीहरु लाई एउटा टपिक मा बोल्नु भन्यो भने १० मिनेट मजाले बोलिदिन सक्छन। अझै पनि हामीले सुधार गर्नु पर्ने भनेको मुख्य त घर भित्र कै र वरिपरि कै बोलीचाली हो। यसलाई समाय सुहाउदो सुधार गरनु पर्छ। त्यो हामीले चाह्यो भने ३ महिना भित्र नै गर्न सक्छौ। सामान्य – तेरो बाबा खै ? भनेर सोछिन्छ भने बच्चाले सजिलै “उ पल्तिर गाछन” भनेर जवाफ दिन्छ। हामी त्यहि बिन्दु बाट सुधार गर्नु आवश्यक छ। हामी यानी उमेर पुगेकाहरुले नै साना बच्चा लाई तेरो बाबा खै ? सोध्नुको सत्ता – कम्ती मा पनि तिम्रो बाबा खोई ? सम्म को सोधाई राख्नु पर्छ कम्ती मा पनि “फलानो ठाउँ मा जानु भएको छ” भन्ने उत्तर पाउने आशा गर्नु पर्छ र त्यो आएन भने राम्रो गरी नै त्यति नै बेला अव देखी यसरी भन्नु पर्छ है भनेर आफ्ना नजिक का केटा-केटी बाट नै सुरु गर्नु पर्छ।
मलामी र जन्ती मा घर कै २‍-३ जना
मैले2मलामी र किरिया हरु मा सहभागी भए। अचेल महिलाहरु नै घाट सम्मै सानो नानी बोकेरै मलामी पुग्दा रहेछन। महिला पुरुषको बिभेद हटेको मा खुसी लाग्यो। भने स-साना नानीहरुले लास जलाउदै गरेको हेररेको चाही कस्तो कस्तो लाग्यो।
बिबहा जन्ती मा मानिस को राम्रो उपस्थिति हुन्छ यस्ले के देखाउछ भने हामी परम्परागत सँस्कारहरुमा चाही एकजुट छौ भन्ने देखाउछ। अनि सोच्नु पर्ने कुरा चाही यस्ता अबसरहरु को जमघट मा तास चाही नखेले हुने जस्तो लाग्छ। किन कि साना बच्चाहरुलाई सँस्कार सिकाउने र बुझाउने समाय नै यहि हो। हामीले लेखेर या भनेर सिकाउनु भन्दा देखाएर सिकाएको प्रभाबकारी हुन्छ तर बच्चाले त्यहाँ त सँस्कार भन्दा बढि तास खेलेको मात्रै देख्छ। खेल्न लाई बन्द गर्ने नै गर्नु पर्छ भन्दा खेलि रहेकोलाई नरमाईलो लाग्ला तर हामीले कम्तिमा पनि बच्चाहरु ले सोझै देख्न नसक्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ। मान्छे मर्नु भनेको १३ दिन तास फुकुवा गर्नु हो भने जस्तै देखिन्छ। तास खेल्ने हरुलाई परुवा घर ले बेलुका को खाना नै खुवाएको देखे। यस्ले के देखाउछ भने यो बिस्तारै सँस्कार मै मिसिएर जादैछ।
मिटिङ भेला हरु छ भन्यो भने जरिमाना तिर्नु पर्छ भने जस्तै गरी मेन्युट मा नाम लेखाई सहि गर्नु मात्रै मानिस हरु आई पुग्छन। बिबहा, छेवर, पुजा को सघाउने काम मा भने हामी ठिक समाय मै पुग्छौ र ठिक काम गर्दछौ। हामीले समाज सेवा र बिकास लाई हाम्रो सँस्कार जस्तो बनाउन सकेनौ यसैले नै समाज पछि पर्यो र समाज सँगै सँस्कारहरु पनि पछि परे।
हामीले जति फुई लगाए पनि समाज बिकास नहुदै सम्म हाम्रो सँस्कारहरु पछि का पछि नै पर्दछन। सँस्कार र ब्याक्तिको बिकास हुनको लागी समाजको बिकास हुन अतिआवश्यक छ।
नृत्यमा चाहि १००% दिए हुन्छ।
कुनै कार्यक्रम हुदा पहिले नाँच्ने मानिस खोज्नु पर्ने अबस्था थियो अव त्यो चाही गाऊँ मा अन्त भएको छ। नाँच्नु भन्यो बने गीत बज्दा ग्राउण्ड भरिने मानिस निस्कनु सक्ने भएको छ गाउँ। आमा समुह, युवा-युवती, बिध्यार्थी एक से एक छन नाँच मा। अर्को नरमाईलो लागेको चाही हरेलो मेला को पहिलो दिन र अन्तिम दिन पुर्खेौयौली नाँच हुने गर्दथे त्यो चाही हराएको रहेछ। गत बर्ष झण्डै झण्डै लाखे पनि हराएको यस्ले के देखाउछ भने मानिसहरु किन निराश छन ? सँस्कार जस्तो कुरा लाई हामीले बेवास्ता गरेका छौ।
हरेलो मेला र गुनासोको पोका
लाखे टोलीले कुनै कार्यक्रम नगरेको देखेर बुझ्न मन लाग्यो। बुझ्दा थाहा भयो अधिल्लो बर्ष पुरुस्कार मा ५००० लेखेर खाम मा ५०० दिए शृङगारको खर्च पनि उठेन भन्ने कुरा सुनियो। यथार्थ के हो त्यति बेला नै फैसला हुनु पर्छ। खाम भित्र ५०० हुदा उनिहरुले आयोजकहरुलाई गल्टीले भयो या के कारण हो भनेर हेर्दा बितिकै नै कुरा को फैसला हुनु पर्छ अनि मात्र गलत नियत को पर्दाफास हुन्छ। या यथार्थ कुरा बाहिर आउछ। आलबोट को सार्की टोलिको गुनासो पनि त्यस्तै थियो। मेला आयोजक समितिले नै लाखे, आमा,पाहुना कलकारलाई, बाहिर कलकार कस्ले बोलाउने या कसरी बोलाउने जस्ता कुरा पहिल्यै मेला आयोजक समितिले पास गरेको हुनु पर्दछ। कति पुरुस्कार दिने जस्ता मेलाको आम्दानी र खर्चको हिसाव ले पुरुस्कार मा समानता हुनु पर्छ। काम गर्नु सजिलो छैन। खास गरी सबै को चित्त बुझाउनु गाह्रो कुरा हो। युवा कल्वले यस्तो चुनौती पुर्ण कामलाई सफलरुपमा चलाई रहेकै छ। अन्य ठाउँ मा मेलाहरु मा ब्रेक लाग्दा हाम्रो हरेलो मेला चलिरहेको छ। हरेलो लाई ब्यबस्थीत गर्नको लागी हरेलो आचारसंहिता र हरेलो बिकास समितिहरु बन्नु आवश्यक छ। जस्ले भाबि दिनका हरेलो लाई कस्तो सुधार गर्ने जस्ता कुराहरु को योजना बनाउन सकोस।
कलकार बोलाउनु नराम्रो होईन गाउँले मेला टिकट बेच्नु मिल्ने महोत्सोव जस्तो नभएको ले र सम्भव नभएको ले कति कलकार बोलाउने कति सम्म पुरुस्कार दिन कस्तो सम्मान गर्ने जस्ता कुराहरु मेला लाग्नु पुर्व नै समितिले निर्णय गर्नु पर्छ। बोलाईदै छ भने को को बोलाईदैछ, कति खर्च हुन्छ मेला ले थाम्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा को पहिल्यै लेखाजोखा हुनु पर्छ। हे सम्म देखियो भने मैले बोलाएको कलकार ले किन सम्मान पाएन सम्म कुरा हरु निस्केको देखियो। कलकार बोलाउने आधिकारिकता को सँग छ ? मेला आयोजक को आचारसँहिता मा प्रष्ट हुनु पर्छ।
सरसफाई चाहि पहिले भन्दा राम्रो छ अझै सुधार गर्नु पर्छ।
अचेल फोहर लुगा लगाएर घुमेको बच्चाहरु कम्ती देखिन्छ। बच्चाहरु सफा छन। बजार को फेशन ले गाउँ भित्रै सम्म छोएको छ। सबैले कुरा मिलाए पनि जुत्ता र चप्पल मा चाही गाउँले बेखबर नै छन। टाई लगाएर चप्पल लगाउदै स्कुल। कलेज गै रहेका बिध्यार्थी देख्दा कस्तो कस्तो लाग्छ।
कयौ का बाबा आमाले हरेक छोरा जो कलेज जान्छन दैनिक ५० खाजा दिनै पर्छ। स्कुल जानेलाई २० रुपैया। घरै बस्नेहरुले पनि फोन खर्च दिन कै ५० जति दिनु पर्ने आमा-बाबा पनि देखेको छु। यस्ले के देखाउछ भने हामी गाउँले स्तरमा उत्पादन मुखी काम गर्न सकेका छैनौ गाउँले हरुले आफुलाई ब्यबसायिक नबनाउने हो भने छिट्टै समस्याहरु देखिन सुरु गर्छ।
बच्चाहरु कै सहकारी खोलि दिनु पर्छ। उनिहरु नै आफै बचत गर्ने बानी बसाल्न सकुन। हरेक महिना को होईन हरेक २ महिना मा २० रुपैया बचत गर्ने गरी exe.Generation- saro sahakari जस्तै उनिहरुले नै बचत गरेर ठुलोहरुलाई लगानी गर्नु दिनु पर्छ। यसो गर्नु सक्यो भने बच्चाहरु उत्पादन मुखी हुन सक्छन। र आफुले पछि पढाई खर्च आफै जम्मा गर्न पनि सक्छन। हरेक बिध्यार्थीले खेत मा काम गरेकै छ। उनिहरुलाई कम्ती मा पनि एउटा पातो बेसार, अदुवा, केराउ, भट्टा, रायो, मुला उखु जस्ता नगदे बाली आफै लगाउने प्रेरित गर्नु पर्छ। हरेक आमा बाबा ले यस्तो गर्ने हो भने हाम्रो बच्चाहरुलाई जागीर छैन केले पढाउने भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन। यस्तो अवसर हुने हो भने २० रुपैया १ दिन को खाजा हो उनिहरुले घर मै खाएर या नखाएर पनि या दशै तिहार जस्ता उत्सव मा ५० रुपैया ले बचत गर्न बानी बसालि दिए १० बर्ष मा उनिहरु आफ्नो खुट्टा मा आफै उभिन सक्ने हुन्छन। हामीले जति कोशिस गर्दा पनि उद्यमी र ब्यबसायी वन्न सकेनौ। हामी मा जेनेरेशन ग्याप थियो। हामी कहिल्यै पनि युवा- अभिभावकहरुको बैठक मा पुग्ने र बस्ने बिचार राख्ने ठाउँ नै थिएन। त्यो ग्याप लाई पुरेर पुस्ता बिचको सरल पुल बनाउन सकिए मात्रै समाज सुन्दर र बिकसित हुन्छ।युवा, आमासमुह, अभिभावक या कुनै एक समुहले हामीले गर्ने हो भनेर बसियो भने कर बलले १-२ काम हुन्छ अनि सेलाएर जान्छ। हामीलाई जागरुक पुस्ता चाहिएको छ जस्ले जेनेरशन ग्याप भरेर सरल र सुगम गाउँ समाज को बिकास गर्न सकोस।
अवको नयाँ बर्ष देखि हामी यस्तै कोशिस मा छौ। कम्ती मा पनि गाउँका साझा काम हरु सबै मिलेर गरौ। जस्तै टेलिफोन महसुल, केबुल महसुल, ईन्टरनेट महसुल जस्ता कुराहरु ब्याक्तीगत रुपमा आफै आफै गएर तिर्ने भन्दा पनि महिना को १ दिन उनिहरुलाई नै गाउँ मा बोलाएर सबैले एक मुस्तै तिरौ या हामी आफै जम्मा पारेर तिर्न जाउ यसो गर्दा गाउँले को सबैको १ दिन खेर पनि जादैन। बाटो खर्च र खाजा खर्च पनि बज्छ। ८० रुपैया को बिल तिर्नु १८० रुपैया जादा को र आउदा को १८० रुपैया तिरेर जानु बुद्दिमानी हो जस्तो कुनै एङगल बाट पनि लाग्दैन। यो सबै हामी मा एकता हुन नसकेकोले हो। अहिले हरेक फेशबुक युजरले मुबाईल मा २००-६०० रुपैया मार्षिक खर्च गरिरहेका छन। सबै मिलेर वाईफाई फ्रि जोन बनाउने हो भने यो एक जना को भाग मा २०-५० रुपैया पनि पर्ने छैन। अचेल ६०००-८००० रुपैया को मुबाईल नबोक्ने मानिस कमैछन उनिहरुले मात्रै जस्को वाईफाई मुबाईलमा वाईफाई डिभाइस छ त्यो समुह मिलेर गाउँ कै हट प्वाईन्ट टोकेर वाईफाई नेट सेवा लिने हो भने गाउँ पनि मिलेको देखिने- कम्तिमा सेवा पनि सबैले लिन सकिने बनाउन सकिन्छ। मात्रै खाचो छ हाम्रो एकता को।
आफुलाई लागेका सजिलो उपायहरु सेयर गर्नुहोस। बिचार को आदन प्रादानले नै हाम्रा भाबि बाटोहरु सजिलो हुन्छ। बिकास भनेको मानिस र आवश्यकता बिचको सुगमता हो। अवको आवश्यकता भने को उत्पादनमुखी समाज र रचनात्मक सक्रिय ब्याक्ति को जस्ले गाउँ मा सुगमता ल्याउन सक्छन। ईन्टरनेट को सन्सारले अव सुगम र दुर्गम को सिमाना भत्काउने छ। ईन्टेरनेट सहि सदुपयोग गरे यो खुल्ला रेफरेन्स स्रोत हो हामी हाम्रो इच्छा ले के सिक्ने आफै हेर्न र सिक्न सक्छौ। अवको समाज भनेको शेयर & केयर गर्नु सक्ने हुनु पर्छ। आफु समाज भित्र जन्मिनु को दायित्व सबैले सिक्नु पर्दछ।
हरेलो मेला नजिक आउदै गरेको ले हरेलो सम्बन्धी बिगत का गुनासो जुन मैले सुनेर आए त्यो लेखेको छु। अर्को कुरा आमा समुह को फर्माईस को पनि हो। हरेलो मा एउटा राम्रो चलन हरेक वडा को आमा समुहले नृत्य प्रस्तुत गर्दछन। यो सँगै आएको बिकृति भनेको वडा वडा को कस्ले कति आफ्नो आमा समुहलाई फर्माईस नगद दिने भन्ने प्रतियोगिता जस्तै पो भएको रहेछ। हौसला दिनु राम्रो कुरा हो प्रतिस्पर्धा कै रुपमा कुन वडाले धेरै रकम जम्मा गर्ने भन्ने चाही अलि नसुहाउदो देखियो। गत बर्ष ६ वडा ले आफ्नो आमा समुहले ७-८ हजार जति फर्माइस गरे, ७,८,९ ले त्यो लाई जित्ने हो जसरी नगद सो गरे। यो रकम १६ हजार सम्म पुग्यो जुन कि अधिल्लो बर्ष ५ हजार -६ हजार को नजिक थियो रे। छिमेकि गाउँ बाट आएक हरु नृत्य हरु पनि नराम्रा हुदैन फर्माईस गर्ने हरुले बुझिदिए या मेला आयोजक ले नै आचारसँहिता मा यस्तो गतिबिधि बैध र अबैध पहिल्यै नै बुझाउन सक्यो भने समस्या आउने थिएन होला। यस्ले के खतरा देखाउछ भने अर्को वडा को भन्दा कम्ति फर्माईस आउछ लाज हुन्छ भो नृत्य नदेखाऔ भन्यो भने हरेलो को सुन्दरता नै हराउछ। जसरी आलबोटले लाखे ल्याउन बन्द गर्यो, पुर्खे्यौली आउन बन्द गरे, आमा समुहहरुमा पनि त्यस्तो भावना पलायो भने हरेलो को महत्व नै हराउदै जान्छ। खेलकुद मा पनि त्यस्तै बिकृति पसेको छ। स्थानिय खेलाडी हुदा हुदै बाहिरा का खेलाडी किनेर खेलको पुरुस्कार जित्ने होड चलेको छ। गत बर्ष घतानले आफ्नो खेलाडी ३ कना मात्रै खेलाएर बाहिर को खेलाडी हालेको थियो, भने पात्लेखेत ले ४ खेलाडि बाहिर को लिएको थियो। यस्ले खेलकुद मा स्थानिय बिकास गर्देन। प्रतिभा देखाउने ठाउँ भनेकै मेलाहरु हुन खेलाडी को लागी हामी किनेको खेलाडी मा भर पर्यौ भने कहिले उडाउछ हाम्रो प्रतिभा ?
बरु महिान को १ दिन हात बजार लगाऔ। त्यहि ति सबै केबुल, बिजुली, ईन्टरनेट का पदाधिकारीलाई गेस्ट बोलाऔ त्यही बेला महसुल तिरौ। फाईनान्स हरुका एक्सेटन्सन काउन्टर हरुलाई बोलाउ। बिदेश बाट पठाएको पैसा त्यहि बुझ्ने या एजेन्ट लिने तैयारी गरौ ।महिना को १ दिन नाँच गान पनि गरौ। हाम्रो उत्पादनहरुलाई पनि बेचौ। हामी स्थानिय प्रयटन को कुरा गर्दछौ यस्ले समाज लाई परिबर्तन गर्दैन। मात्रै २-४ जना ब्यबसायिलाई धनि बनाउछ। बाकी गाउँलेलाई २५ मा पाईने कोक ३५ तिर्नु पर्ने महँगाई मात्रै दिन्छ। त्यही कारण हुन धान्द्रुक र राम्चे जस्ता पर्यटक आउने गाउँ पनि रित्तो हुने गरि बसाई सर्नु को कारण। हामीले पर्यटक ल्याउने भन्दा पहिले हामीले के उत्पादन गर्ने र कस्लाई कसरी बेच्ने तैयारी/ जागरण बिना को होम स्टे र टुरिजम त्यो बिकृति को सुरुवाट मात्रै हो। समाज को बिकास होईन। समाज बिकास र आर्थिक सुधार को लागी समाजले यस्ता कुराहरुलाई बुज्नु पर्दछ।
Posted on June 24, 2013 by Wakhet Diary
सम्झनाको स्पर्शहरु:घुम्ती सिनेमा
Posted on June 21, 2013 by Wakhet Diary
बिस्तारै गाउँ खरीपाती (कालोपाती) बाट कागजकलम मा उक्लीएको थियो। लाहुरेहरुले रेडियो ल्याउनु सुरु गरेका थिए। काठे सलाई हरु भर्खरै गाउँ पसेका थिए। हामी त्यही सलाई को दब्बा मा भमरा बन्द गरेर रेडियो बजाएको नक्कल गर्दथ्यौ। फोटो एलबम हुनु भनेको त्यो बेला ठुलो कुरा हुन्थे।
लाहुरेहरु ले ल्याएको पिक्चर बक्स
लाहुरे हरु स्वदेश फर्कने बेला मा ट्रेन स्टेशन तिर बेच्न राखिएका नेगेटिभ स्लाईड हालेर फोटो हेर्न मिल्ने बक्स आफ्ना आमा बाबा र छरछिमेकलाई फोटो देखाउन ल्याएका हुन्थे। यस्ता डिभाईसहरु कुनै सिङगल नेगेटिभ एउटा एउटा छिराएर हेर्न मिल्ने हुन्थे। कुनै एक पछि अर्को नेगेटिभ आफै फेरिने खाले थिए र कुनै कुनै चाही दोहोरो घुमाउनु मिल्ने खाले हुन्थे। केदारनाथ, बद्रिनाथ जस्ता मन्दिर र धार्मिक स्थलहरुको राम्रे प्रचार गरिरहेका हुन्थे यस्ता पिक्चर बक्सहरुले। जम्मुकस्मिर, दार्जिलिङ, सिक्किम का मनोरोम ठाउँहरुको फोटो हरु हुन्थे। लाहुरे हरुलाई नेगेटिभ फेरि फेरि पालै पालो फोटो हेराउदै ठिक्क हुन्थे। पछि लाहुरेहरु फर्केर जान्थे पल्टन मा ति पिक्चर बक्स हरु आफ्नो भाईहरुलाई दिएर जान्थे। कहिले कहि हामी उनिहरुको गाई भेसीलाई पुग्ने गरि धाँस कातिदिए पछि फोटोहरु फेरि हेर्न पाउदथ्यौ।
त्यो बेला नै पिक्चर बक्स मा पोर्न
केदारनाथ, बद्रिनाथ,जम्मु कस्मिर, दार्जिलिङ, सिक्किम को सिन बाहेक, कलकारहरुका फोटो र नग्न फोटोहरु पनि पिक्चर बक्सहरु मा लुकाई छिपाई त्यो बेला नै गाउँ गाउँ मा पुगेको हुन्थे। पुराना पुस्तालाई घार्मिक र ठाउँ ठाउँको मनोरम स्थल देखाईन्थे। साथी सँगीहरुलाई सिनेमा को हिरो हिरोईनको फोटोहरु पनि देखाउथे भने मन मिल्ने दौतरीहरु नग्न फोटोहरु पनि हेर्ने गर्दथे। यस्तो सुबिधा चाहि त्यो दोहोरो घुमाउन मिल्ने पिक्चर बक्स हरुमा हुन्थे।कता धुमाएर के देखाउनु पर्ने हो उनिहरुलाई थाहा हुन्थ्यो। एउटै बक्सले बुढापाका ले हेर्दा बद्रिनाथ, केदारनाथ र उनिहरुले हेर्दा नाङगोनाथ हेर्ने सिपालु हरु पनि त्यो बेला नै थिए।
गाउँले मेला मा नै आई पुग्न थाले त्यसता खेलौना पिक्चर बक्स
गलेश्वर को मेला मा यस्ता बक्सहरु पहिलो पटक आईपुगे। ईण्डियन डुलुवा बेपारीहरु, मुरली, बाँसुरी, काईयो, माला, पोते, टिका, रिङ जस्ता गहना बेच्नेहरुले नै यस्ता खेलौना हरु पनि ल्याउन थाले। पिक्चर बक्सहरु त्यो बेला पेसा हुने ले मात्रै किन्न सक्थे। अनि त आफु भन्दा सानो समुहलाई १ पटक हेरेको दस पेसा , बिस पैसा उठाएर यस्ता पिक्चर बक्सहरु मा फोटोहरु देखाईन्थे। कतिपय ठाउँमा घुम्ती ब्यपारीहरुले नै यसै गरी केटा केटी लाई घुम्ती सिनेमा देखाउने गर्दथे। मेलो मेसो मिलेको बेला मा हामी पनि खल्टी मा कति पैसा छ झारझुर पारेर घुम्ती सिनेमा हेर्ने गर्दथ्यौ। जोगी र यस्ता घुम्ती ब्यपारीहरुले बच्चा चोरेर पूल बनाउने ठेक्दारलाई पुल मा भोग (बलि दिन) हाल्न लाई बेच्छन भन्ने हल्ला त्यति बेला थियो। हामी लाई एक्लै एक्लै नहिड्नु नचिने को ले दिएको नखानु र नचिनेको ले बोलाउदा पछि लागेर न जानु भन्ने सिकाईएको हुन्थे।
सानो बजारमा भिडियो हल हरु सुरु भए
बेनी बजार तिर पछि मात्रै भिडियो हलहरु सुरु भए त्यो पनि नेपाली हुदैन थे। हिन्दी फिल्महरु हलमा लाग्ने गर्दथे। ५ रुपैया तिरेर ३ घन्टा सिनेमा हेर्ने गर्दथ्यौ। दिन भरि काम गरेको १२ रुपैया पाउने बेला मा ५ रुपैया को भिडियो सौखिन हरुले मात्रै हेर्ने गर्दथे। बिच बिच मा आउने पत्यार लाग्ने बिज्ञापन हरु भगाउदा कहिले कहि फिल्महरु पनि भाग्ने गर्दथे अनि अध्यारोमा बसेर हेरेका हरुले गयो गयो फर्काउ फर्काउ भनेर हो होल्ला गर्ने गर्दथे। हिण्दी मा हुने हुनाले धेरै ले बुझ्दैनथे। त्यो बेला भिडियो हेर्ने बेला मा बत्ती पुरै निभाईन्थे। एउटा फिल्म हेरर बाहिर निस्कदा फनफनी घुमाईरहेको हुन्थ्यो भने आँखा तिरमिर पर्ने गरि दुखेको हुन्थ्यो। जेनेरटर बाट चल्ने यस्ता भिडियो हलहरु यहि छन भन्ने कुरा जेनेटर कराएको आवाज ले थाहा हुने गर्दथे।
गाउँले मेलाहरुमा भिडियो हलहरु
समाय बित्दै गयो गाउँलेहरुलाई मेला मा भिडियो देखाउन भिएचएस, टिभि र जेनेटर बोकेरै गाउँले मेलाहरुमा पनि घुम्ती सिनेमा हरु पुग्न थाले। भकारी को गोठ भित्र भिडियो चलिरहेको हुन्थे भने माईक मा ३ गाउँ पर सुनिने गरि आवाज बाहिर नै सुनिन्थे। त्यो बेला को खाजा भनेको जेरी (जुलेबी) र अतिरिक्त रमाईलो भिडियो हल हुने गर्दथे। परम्परागत लाईभ लोक नृत्य गर्ने कलकारहरु मैनटोलको उज्यालो मा झनै राम्रो देखिन्थे।
(सम्झना को स्पर्शहरु: जमानाको कुरा- घुम्ती सिनेमा बाट)
हरेक महिना भेला आठौ र हरेक महिना पुस्तक उपहार को चौथौ महिना निरन्तर
Posted on June 15, 2013 by Wakhet Diary
आज वाखेत मा
Exe. Generation – सरो सहकारी को आठौ मार्षिक भेला हुदैछ।
बिध्योदय निमाबि पुस्तकालय भ्रमण बर्षः २०१३ अन्तर्गत बिदेश र स्बदेश मा सँकलन भएका पुस्तकहरु, हरेक महिना पुस्तक उपहार अभियानको चौथौ महिना मा पनि आज हस्तान्तरण हुदैछ।
आज असार १ गतेको मार्षिक उपहार मा छन।
-भुपु पेन्सनर हरु हरेक पटक को पेन्शन बाट दिनु हुने पुस्तक उपहार को जेठ महिना मा प्राप्त- ३२ थान पुस्तक
-नर ब. राम्जाली ( अमेरिका) बाट प्राप्त- २१ थान पस्तक, नगद, भलिबल & नेट सेट – ३ सेट, बास्केटबल & नेट -१
-रेशम पाईजा ( साउदी) बाट प्राप्त – १००० रुपैया बराबर को पुस्तक
साउने -१ गते को हरेक महिना पुस्तक उपहार अभियान मा सहभागी हुन चाहानु हुन्छ ? नेपाल मा आफ्नो परिवार लाई पैसा पठाएको बेला मा बिध्यालय पुस्तकालय ब्यबस्थपन समितिलाई सम्पर्क गरेर आफुले उपहार दिन चाहेको पुस्तक बुझाउनु। यो असार महिना भरि प्रात्त पुस्तकहरु साउन १ गते हस्तान्तरण हुन्छ।
हरेक महिना पुस्तक अभियान मा अहिल सम्म युके, अस्ट्रेलिया, हंङकङ, साउदी, अफगानिस्तान, अमेरिका बाट उपहार प्राप्त भै सकेको छ।
आज को पुस्तकहरुको बिबरण बिध्योदय निमाबि वाखेत ले छिट्टै अपडेट गर्ने छ। कार्यक्रम समापन सँगै अपडेट गर्ने छ।
हामी आज को आजै हाम्रा अपडेटहरु सन्सार भरि पुराउन सक्छौ। किन कि हामी लाई केशव पुन (हंङकंङ) ले कम्पुयुटर उपहार र महाबीर पुन ” हिमालयन वायरलेस” को नेटवर्क सँग जोडि दिनु भएको छ। धन्यबाद सबै दाताहरुलाई ।
२०६९ साल मा एसएलसी उतिर्ण बिध्यार्थीहरु
Posted on June 14, 2013 by Wakhet Diary
Wakhet Diary Update
हाम्रो वाखेतका बिध्यार्थीहरु जस्ले यो बर्ष को एसएलसी पास गरे (बिधार्थी को नाम- वडा- अभिभावक परिचय)
१.दिनेश पाईजा (७) – सोम ब. पाईजा को छोरा
२.सुमन पुन (८) – लाल ब. पुन को छोरा (पल्लो गाउँ स्यानु को भाई)
३.निल ब. पाईजा (६) – स्व. होम ब. पाईजा को छोरा
४.भक्ती प्रसाद थापा- खिम ब. थापा को छोरा (थापा काईला)
५.याम ब. पुन (९) – नर ब. पुन को छोरा (अनजे मामा)
६.बिकास पुन (९) – कर्ण ब. पुन को छोरा
७.यु ब. पुन (९) -दिल ब. पुन को छोरा (अजनेको लाले को भाई)
८.धन कुमारी रोका (९)- धन ब. रोका को छोरी
९.दिब्या पाईजा (७) – स्यानु पाईजा को छोरी
१०. टँकल पुन (७) – (अमर ब. पुन को छोरा)
११.रबिन रोका (९)- राम ब. रोका को छोरा (डाबिले रामु)
क्रस . ६, ९, प्रथम डिभिजनमा, बाकी सेकेन्ड डिभिजनमा र १ जना थर्ड डिभिजनमा पास गरेका छन। सबैलाई बढाई छ।
छुटेका नाम हरु थप्नुस। आफ्नो वरिपरिका भाईबैनीहरु बारे मा सोधपुछ गरेर छुटेका नाम र माथीका नाम मा कुनै भूल छ भने कमेन्ट मार्फत सुधार गर्नुहोस।
कस्ले कस्ले दिएका थिए परिक्षा यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस
Posted in 1.वाखेत डायरी	| 1 Reply
पाखापानीमा फेरि पहिरो गयो
June 14, 2013 (जेष्ट ३१, २०७०)
म्याग्दी जिल्ला को पाखापानी गाबिस को औल मा पेरि पहिरो गयो।
Photo By: Rim P. Roka Wakhet Myagdi
स्थानिय प्रत्यक्षदर्शिका अनुसार अहिले पनि धुलोको मुस्लो र आवाज सहित पहिरो गएको आवाज आई रहेको छ भने धुलो को मुस्लो उडिरहेको छ। बर्षा मा सुख्का धुलो उडेको देखिनु ले पहिरो निकै ठुलो भएको र चट्टानहरु पहिरो ले फुटेको अनुमान गरिएको छ। छिटो भन्दा छिटो जिल्ला प्रशासनले घटना को स्थिति बुझ्न टोलि राहुगढ को स्थिति बुझ्नु पर्दछ। यस्तै पहिरो गत बर्ष पौष महिना मा पनि गएको थियो र राहुगढ ६ घन्टा सम्म थुनिदा गलेश्वर लगायत का खोला किनारका बस्तीहरु त्रस्त बनेका थिए।
स्थिति बारे बुझ्न छिटो भन्दा छिटो कोसिस गरियोस।
गतसाल को पहिरो को खबर
हिजो पाखापानी औल मा पहिरो,राती देखी वाखेत मा हिउँ पर्यो